ဘဝမှတ်တိုင်: December 2015
Samsung Phone-Huawei-Honor- Myanmar Font Smart Zawgyi Pro
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 12/27/2015 12:40:00 am0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 12/27/2015 12:37:00 am0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 12/27/2015 12:15:00 am0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 12/27/2015 12:13:00 am0comments
ZTE ဖုန်းများကို SD Card ဖြင့် Firmware ရေးသားနည်းစာအုပ်
ZTE ဖုန်းများကို SD Card ဖြင့် Firmware ရေးသားနည်းကို
ထိုင်းမှာတော့ လူသုံးများလာတာကိုတွေ့မိတယ်၊ ဟိုတစ်နေ့ကလည်း
ညီအကိုတစ်ယောက်ရဲ့ဖုန်း Firmware ကြွသွားလို့ မတင်တတ်တော့ဖူး
ဒီ ZTE ဖုန်းအများစုကို SD Card ဖြင့် Firmware ကိုရေးသားပေးနိုင်ပါတယ်
Huawei ဖုန်းတွေကို SD Card ဖြင့်တင်တဲ့နည်းနဲ့အားလုံးနီးပါတူပါတယ်။
Flash Firmware with SD Card
၁။ Firmware ကိုတော့ ZTE Official Web တွင် ဒေါင်းလော့ရယူပါ
Download Here ZTE all models Firmware
၂။ ဒေါင်းလော့ရလာတဲ့ Firmware သည် update.zip ဆိုပြီး နာမည်ဖြစ်နေရပါမည်
တကယ်လို့ အခြားသော နာမည်တွေဖြင့် ဒေါင်းလော့ရလာခဲ့ရင်လည်း
Update.zip ဆိုပြီး Rename လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
၃။ အောက်ပါပုံအတိုင်း Update.zip ဖိုင်ကို SD Card သို့ကူးထည့်လိုက်ပါ။
၄။ ဖုန်းကိုပါဝါပိတ်ပြီး Recovery Mode သို့ဝင်ပါ၊ Volume up + Power Key ကို
တွဲနှိပ်ထားပါ အောက်ပါပုံအတိုင်းမြင်ရသည်အထိ Power Key ကိုနှိပ်ထားလိုက်ပါ။
၅။ Vol+Down ကီးကိုနှိပ်ပြီး "apply update from sdcard2" >>
၆။ Vol+Up ကီးကိုနှိပ်ပြီး Firmware ရေးသားခြင်းကို စတင်လိုက်ပါ။
၇။ Flashing Process တစ်ခုစတင်နေတုန်းခနစောင့်နေလိုက်ပါ
၈။ အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ "Reboot System Now" ကိုနှိပ်ပြီး
Reboot ချပေးလိုက်ပါ ပါဝါပြန်တက်လာတဲ့အခါ သင့်ဖုန်းမှာ
Official Firmware ကို ရေးသားခြင်းကိစ္စ အောင်မြင်စွာဖြင့် ပြီးဆုံးပါပြီ။
ZTE ဖုန်းများကို SD Card ဖြင့် Firmware ရေးသားနည်းစာအုပ်
ပြန်လည်ဖေါ်ပြပါက Credit ပေးပါ
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 12/27/2015 12:10:00 am0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 12/27/2015 12:08:00 am0comments
Xiaomi mi3w ကို miui6တင်ပြီး Root နှင့် Myanmar font ထည့်သွင်းနည်း
အရင်ဆုံး Xiawmi mi3w miui6 firmware လေးအရင်ဒေါင်းလိုက်ပါ
ဒေါင်းလို့ရတဲ့ zip ဖိုင်လေးကို internal memory ထဲ့ထည့်ထားပါ
ထည့်လို့ပြီးသွားရင်တော့ home scrreen မှာ updater ဆိုတဲ့ application လေးလိုက်ရှာလိုက်ပါ
Updater application လေးထဲရောက်ရင်တော့ MENU ကိုနိုပ်ပြီး select update package ကိုနိပ်ပါ
နိုပ်ပြီးသွားရင် စောနကဒေါင်းလုပ်ဆွဲထားတဲ့ ZIP ဖိုင်လေးကိုရွေးပေးပါ။
Firmware တင်နေပါလိမ့်မယ် ပြီးသွာရင် reboot တောင်းရင် Reboot now ကိုနိုပ်ပြီး
Reboot ချလိုက်ပါ။ပြန်တက်လာရင်သင့်ဖုန်းလေး MIUI6version 4.4.4 လေးကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။
အခုတစ်ခါတော့ ROOT ဖောက်ရန်အတွက်ဒါလေးကိုဒေါင်းပေးပါဗျာ။
ဒေါင်းလိုရလာတဲ့ zip ဖိုင်လေးကိုစောနကလိုပဲ internal memory ထဲထည့်ပြီး
Updater application ကနေ MENU ကိုနိုပ်ပြီး select update package ကိုနိပ်ပါ
loading အတန်းလေးသွားနေပါလိမ့်မယ် ပြီးသွာရင် reboot တောင်းရင် Reboot now ကိုနိုပ်ပြီး
roboot ချလိုက်ပါ။ပါဝါပြန်တက်လာရင်တာ့ home screen မှာ Suoeruser application ကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာဖောင့်သွင်းရန်အတွက်ကတော့ G730 font changer version2လေးနဲ့ဖောင့်ချိန်းပေးလိုက်ပါ
ဖောင့်ချိန်းပြီးသွာရင်တော့ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Keyboard တစ်ခုခုနဲ့ မြန်မာစာကိုအဆင်ပြေပြေအသုံးပြုနိုင်ပါပြီဗျာ။
ရေးသားသူ - အာကာ
And here's the official download link : MIUI6Stable for India.
Use this recovery only!
1. Disable Dual Boot
2. Format /system 1 and system 2
6. Factory Reset after flashing rom! (<--- Important xD)
Some users reported bootloop!
Please provide me Logcats so that i could fix bugs
(You can take logcat in bootloop as well!)
This thread will be updated after Beta release
MK's Android L, ROM for the Xiaomi Mi 3
Current Stable Version: Under Testing
Current Beta Version: Soon to release!
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 12/26/2015 04:16:00 am0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 12/26/2015 04:09:00 am0comments
အရင်ဆုံး HiSuite ကို သွင်းပါ Driver သိအောင်သွင်းရတာပါ HiSuite က
ဖုန်းမှာUSB Debugging ကို အမှန်ခြစ်ပါ
ဒေါင်းထားတဲ့ROOTGENIUS ကိုဖွင့် ပြီး
ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်း လုပ်ပါ အဆင့် ဆင့်AUTO လုပ်သွားပါလိမ့် မယ်....
တွေ့ တဲ့ အတိုင်းပါပဲ ..... SUPERSU ပေါ်နေပြီဆိုရင် Root ဖေါက်တာ အောင်မြင်သွားပါပြီ......
Root ဖောက်နည်းများကို စတင်လေ့လာတော့မယ်ဆိုရင် ပထမဆုံးသိထားရမယ့် USB debugging on & Off ဆိုတာ
၃။ မိမိဖုန်းမှာ ရှိတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ Data များကို Backup လုပ်ထားရန်
လိုအပ်ပါတယ် Backup လုပ်ဖို့ရန်အတွက် အကောင်းဆုံးကတော့
Apk လေးတွေနဲ့ဆိုအဆင်ပြေပါတယ် အောက်ကလင့်မှာရှိတဲ့
Apk တွေရဲ့ အကြောင်းကိုအရင်ဖတ်ကြည့်ပါ ပြီးတော့မှ မိမိနဲ့အဆင်ပြေမယ့်
Apk တစ်ခုကို ဖုန်းမှာ အင်စတောလုပ်ပြီး Backup ပြု လုပ်ထားလိုက်ပါ
ဖုန်းအားလုံးအတွက် Android Device များကို Backup လုပ်ပေး၇န် android application ဒေါင်း၇န်
၄။ Samsung Driver ကို အရင်ဦးမှာ
ပြီးရင် ကွန်ပျူ တာမှာ အင်စတောလုပ်လိုက်ပါ။
တကယ်လို့ အင်စတောလုပ်ထားပြီးသားဆိုင် မလိုတော့ပါ။
Credit to : Original developer
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 12/22/2015 07:06:00 pm0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 12/22/2015 07:03:00 pm0comments
Hardware လေ့လာချင်တဲ့ ဘောဒါတွေအတွက် Huawei Diagram
ချင်စီခွဲပြီး Mediafire မှာတင်ပေးထားတယ်နော်
C8813图纸 Diagram pdf
E1100u Diagram pdf
E357u Diagram pdf
E586Es-2 Diagram pdf
EDGE Diagram pdf
G510 Diagram pdf
G520 Diagram pdf
G525-U00 Diagram pdf
G610-U00 Diagram pdf
G610C-C00 Diagram pdf
G700-T00电路图 Diagram pdf
G700-U00 Diagram pdf
G700 Diagram pdf
MT1-U06+Mate Diagram pdf
P6-U06项目维修手册+V1.0 Diagram pdf
S7-301u Diagram pdf
730 Diagram pdf
T8951 Diagram pdf
U8951D夹具资料 Diagram pdf
U9200-++P1 Diagram pdf
U9200 Diagram pdf
Y210(8685) Diagram pdf
Y210 Diagram pdf
Y210C Diagram pdf
Y300 Diagram pdf
Y300C Diagram pdf
Y320 Diagram pdf
Y500 Diagram pdf
Y511-U00 Diagram pdf
Y511 Diagram pdf
华为G510维修手册(T8951%2CV1.0%2C中文%2C中国移动) Diagram pdf
125 Mobile / Mudon
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 12/21/2015 09:13:00 pm0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 12/21/2015 08:52:00 pm0comments
Credit by ThanToeAung
Play Hi-Fi Live Smart
Extreme Hi-Fi & Slim Body
Fun With Colorful Shots
Let the Hi-Fi Revolution Ring
Enjoyable Fun Captures
New look New Lifestyle
Extreme Hi-Fi & Video Capture
Extreme Hi-Fi & Video Experience
Flexible Headphones to Wear Your Way
Vividly Record Every Moment
Go to vivo firmware search
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 12/21/2015 08:39:00 pm6comments